musha » Beachbody » 55% Bvisa Chirumbu Chemuviri! Chengetesa $ 39.90 Kwekanguva Chakanyanya
2016 Mutumbi Wechipfu Chekutengesa
55% Bvisa Muviri Wechipfuva Chirongwa Chekushandira!
Kwekanguva kaduku chete, unogona kuchengetedza 55% paBlackbody's Body Beast Workout program. Nekutengeswa kwechikara ichi, iwe unobhadhara $ 39.90 chete pamwe kutumira uye kushandiswa kwepurogiramu yakakwana yepurogiramu yeDVD. Chirunha cheMuviri chinowanzomhanyira $ 89.95
Chii Chiri Chikara?
Chirunha cheMuviri ndechimwe chekutanga chekuita-kubatanidza kushanda, kushandiswa kwekushanda, uye kuwedzera maitiro. Iine 12 Dynamic Set Training Training on 4 DVDs.
Yakasikirwa iwe kuti uvakire muviri mukuru, musimba mune zvishoma zvishoma sekukwanisa. Kana yakashandiswa zvakajeka, Chigunha cheMuviri chinokwanisa kuwedzera 10 lbs yemaviri musimba munguva shoma semazuva 90. Chirwere cheMuviri chakavakirwa pamusana weDynamic Set Training.
Kugadzirisa Dynamic Kurovedza ndechekuenzanirana kwemaseri uye reps izvo zvinoita kuti nguva yemisumbu iwedzere kudzvinyirira nechinangwa chekuneta mutsara uye "kuunganidza" mamwe musimba fiber. Kugadzirisa Kugadzirisa Kurovedza kunobatsirawo kuwedzera hutano hwe testosterone mumuviri wako. Testosterone ndiyo hormone huru inokonzera kukura kwemasimba, naizvozvo kunyanya testosterone muviri wako unoita, inokurumidza kukura.
Dzvanya bheneri iri pasi apa kuti uwane mamwe mazano pamusoro peiyi 55% kubva pamuviri wenyama yekutengesa
* Iyi 55% Kubuda Chigadzirwa Chechigunwe Chigarire chakajeka seC3 / 7 / 16 12: 00 AM EST. Mutengo wemiti uye kushandiswa kwakarurama sekune zuva / nguva inoratidzwa uye inogona kuchinja. Chero mutengo uye ruzivo ruzivo rwakaratidzwa paBlackbody panguva yekutenga ichashandiswa pakutenga kwako chirongwa chekuvhima muviri.
Uya Neni Kana Iwe Unoda Kurera Varume Tank Top $ 11.95 chete